I-Ethiopia isondele empini yombango | Scrolla Izindaba
I-Ethiopia isondele empini yombango
Kuqhuma impi yombango e-Ethiopia, umdondoshiya wezomnotho enyakatho nempumalanga yeAfrika.
Le mpi iphakathi kahulumeni omkhulu wase-Addis Ababa oholwa nguNdunankulu uAbiy Ahmed olwa nesifunda saseNyakatho i-Tigray.
Isifunda sase-Tigray esinenqwaba yamasosha neqembu elalilawula izwe, seliqhumise amarokhethi ezikhumulweni zezindiza esifundeni esingumakhelwane i-Amhara.
Abezindaba i-BBC babika ukuthi, umnyakazo wesifunda i-Tigray People’s Liberation Front (TPLF) isixwayise ngokuqhubeka kweziteleka.
Ngasekuqaleni kwaleli sonto i-TPLF ibisolwa ngokubulala abantu abaningi, kanti inhlangano elwela amalungelo abantu i-Amnesty International ithi, “baningi, mhlawumbe bangamakhulu abantu abagwazwe noma bagencwa babulawa”. Kusolwa ukuthi izisulu bekuyizisebenzi. I-TPLF iziphikile izimangalo.
UNdunankulu oneminyaka engama-44 ubudala uAbiy Ahmed usesikhundleni kusukela ngonyaka wezi-2018.
Uqale ukuhlaba umxhwele emhlabeni njengomshisekeli osemusha, waqeda impi ende yemingcele ne-Eritrea futhi wathembisa izinguquko komunye womnotho okhula ngokushesha emhlabeni.
I-Ethiopia inokwakheka okuhlukahlukene kwezenhlalo, ngomehluko omkhulu nokungezwani phakathi kwezifunda ezinkulu. I-Tigray, esinye sezifunda ezincane, siphethe ohulumeni bakamuva base-Ethiopia. Uhulumeni wangaphambili we-TPLF wayephethe ngesihluku ezinye izifunda ezinkulu kakhulu zase-Amhara nase-Oromia, lapho uNdunankulu uAbiy Ahmed evela khona.
Ngakho-ke njengamanje sekunokuguquka okukhulu – uhulumeni ophakathi ubanga nesifunda i-Tigray.
Abase-Tigray baphinde basabisa ngeziteleka eziya e-Eritrea, ezizodala ukucindezelwa kwesifunda sonke.
Inhlangano yababaleki i-UN kanye ne-UNHCR ithi, abantu abayi-17 000 sebevele babalekela e-Sudan engumakhelwane, base befaka le vidiyo ngenhla.